Xoghayaha Maaliyadda Steven Mnuchin
Senatorada Mareykanka iyo maamulka madaxweyne Trump ayaa heshiis ka gaaray sharciga xirmo dhaqaale oo dhaqaalaha Mareykanka looga samata-bixinayo saameynta xooggan ee uu ku yeeshay cudurka Coronavirus.
Senate-ka ayaa la filayaa inay maanta u codeeyaan xirmadan dhaqaale oo ka kooban 2-trillion oo dollar, ayada oo xubnaha Aqalka Wakiiladana ay ku xigsan doonaan.
“Tani waa maal-gelin xilli dagaal lagu sameynayo dalkeena,” waxaa sidaas yiri hoggaamiyaha Aqlabiyadda Senate-ka Mitch McConnel, isaga oo heshiiska uga dhowaaqaya sagxadda Aqalka Senate-ka, kadib maalmo wada-xaajood uu u socday sharci-dejiyayaasha Jamhuuriga iyo Dimoqraadiga iyo Xoghayaha Maaliyadda Steve Mnuchin.
Hoggaamiyaha xubnaha Dimoqraadiga ee Senate-ka Chuck Schumer ayaa tallaabadan ugu yeeray “Xirmadii ugu ballaarneyd taariikhda Mareykanka ee lagu badbaadinayo dhaqaalaha.”
“Caawimaad ayaa soo socota, caawimaad weyn oo deg deg ah,” ayuu yiri Schumer.
Schumer ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in xirmada ay qeyb ka tahay 100 bilyan oo dollar oo la siinayo isbitaalada iyo nidaamyada caafimaadka dalka, halka 150 bilyan ay aadi doonto gobollada iyo dowladaha hoose, si ay ula dagaalamaan faafitaanka cudurka.